SundaySermons.online: ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ထဲတွင် အသက်ရှင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့သည် အသင်းတော်သို့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် သွားကြသည်။ အဆင်ပြေသည့်အခါ၊ အဆင်မပြေ သည့်အခါ၊ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း လိုသည့်အခါ၊ တနင်္ဂနွေ ဘုရားကျောင်းသို့ သွားလိုသည့်အခါ သွားကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည် စဉ်းစား သင့်သည်မှာ ထိုသို့ သွားသည့် အခါတိုင်း ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက် တော်သို့ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိသွားမည်ဟူသော ခံစားချက်တခု သင့်မှာ အမှန် တကယ် ရှိပါသလား။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသင်၏ တန်ခိုးတော်ကို အချိန်တိုင်းတွင် အလိုရှိသလောက် ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ့်ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီး အသက်ရှင်ရန် နေ့စဉ် အသက်တာတွင် ကြိုးစား အားထုပ် နေကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လျှပ်စစ်မီးကို လိုချင်သလောက် ကြိုက်သလောက် သုံးစွဲနိုင်ပါလျှက် သုံးစွဲ ရန် စိတ်မကူ၊ သုံးစွဲလိုစိတ် မရှိသော သူတစ်ဦးနှင့် တူပါသည်။
လျှပ်စစ်မီး၏ အောက်တွင် ကျွန်တော်တို့ ရှိနေသောအခါ အလင်း၏ တန်ခိုးကို ခံစားရသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တွင် နေသောအခါ ဘုရား သခင်၏ တန်ခိုးကို ခံစားရပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ ထွက်လိုက်ပါက ဘုရား တန်ခိုး တော်ကိုလည်း အလိုလို ဖယ်ရှားပြီး ဖြစ်ပေတော့မည်။
ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၃း၁၂-၂၃ တွင် ရှိသော အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို ဖတ်ရှုဝေငှလိုပါသည်။
မျက်မှောက်တော်တွင် အသက်ရှင်ခြင်း (ထွက်မြောက် ၃၃း၁၂-၁၄)
မောရှေကလည်း၊ ဤလူတို့ကို ပို့ဆောင်လော့ဟု ကိုယ်တော် မိန့်တော်မူသည်တွင် အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ အဘယ်သူကို စေလွှတ် တော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်မသိရ။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်က၊ သင့်ကို သင်၏နာမဖြင့် ငါသိ၏။ သင်သည် ငါ့ရှေ့၌ မျက်နှာ ရပြီဟု အကျွန်ုပ်အား မိန့်တော်မူပြီ။ သို့ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်သည် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာ ရလျှင် မျက်နှာ ရကြောင်းကို အကျွန်ုပ် သိပါမည် အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ လမ်းကို ပြတော်မူပါ။ ဤလူမျိုး သည် ကိုယ်တော်၏ လူဖြစ်ကြောင်းကို ဆင်ခြင်တော်မူပါ၊ အကျွန်ုပ် တောင်းပန်ပါ၏ဟု ထာဝရ ဘုရားအား လျှောက်ဆို၏။ ငါကိုယ်တိုင်သွား၍ ငြိမ်ဝပ်ခြင်းချမ်းသာကို ပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ထွက် ၃၃း၁၂-၁၄)
ဘုရားသခင်သည် လူသားနှင့် နက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေး (A deep personal relationship) ရှိရန် လူသားကို ဖန်းဆင်း ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့် ဧ၀ တို့နှင့်တကွ အေဒင် ဥယာဉ်ကြီးထဲတွင် အမှန် တကယ် လမ်းလျှောက် ခဲ့ဘူးပေမည်။ ထိုအဖြစ် အပျက် သေချာစွာ စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ဘုရား သခင်သည် အာဒံ၊ ဧ၀ တို့နှင့် အတူတကွ စကားပြော နေမည်။ လမ်းလျှေက် နေမည်။ ကမ္ဘာဦး လူသား နှစ်ဦးသည် ဘုရား သခင်၏ မျက်မှောက်တွင် အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်နိုင်စွမ်း ရှိသောသူများ ဖြစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုရား သခင်သည် သင်နှင့် လေးနက်သော ဆက်ဆံရေး တည်ရှိရန် ဆန္ဒရှိနေပါသည်။ ဘုရား သခင်သည် သင့်ကို သူ၏ မျက်မှောက် တော်ထဲတွင် ရှိနေစေ ချင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် မောရှေသည် ဘုရားသခင်နှင့် စကားပြောရာတွင် ဘုရားသခင် ပြုတော်မူခဲ့သော ကတိတော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သတိပေးခဲ့ပါသည်။ မောရှေက အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသနည်း။ ဘုရားသခင်က ပြုတော်မူခဲ့သော ကတိတော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မေ့လျော့ နေသောကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ မျက်မှောက်တော်မှ ဣသရေလ လူမျိုးတို့ကို ဖယ်ရှားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို ပြုလုပ် လိုက်ခြင်းဖြင့် ဣသရေလ လူမျိုးတို့သည် ဘုရားသခင် ပတ်သတ်သော ဓမ္မအာရုံကို ဘယ်သော အခါမျှ ခံစားရတော့မည် မဟုတ်ပါချေ။
ကျွန်တော် တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေခြင်း မပြုကြ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင် ရှေ့တွင် ဂုဏ်ပကာ သန အတွက်၊ (သို့) လူအထင် ကြီးဘို့ အတွက်သာ ရပ်နေကြသည် ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်ထံမှ ဓမ္မအာရုံကို မည်သို့ ခံရပါ မည်နည်း။ ကျွန်တော် တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်း သည့် အတွေ့ အကြုံ မရှိပါလျှင် မည်သို့မျှ ကြီးထွား ရင့်ကျက် နေပါသည်ဟု ပြောဆို၍ မရနိုင်ချေ။
မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင် စိတ်အားထက်သန်မှု အပြည့်ဖြင့် တောင်းဆု ပြုနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင် ဒူးထောက်လျှက် ရှိနေပါသည်။ စိတ်နှလုံးသား အကြွင်းမဲ့ ဖြင့် ဆုတောင်းနေသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများ (အသင်းတော်)တွင် အကြီး မားဆုံး ပြဿနာမှာ ဘုရား သခင်နှင့် နက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေး (A Deep Relationship with God) မရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆုတောင်း ရန်အတွက် အဖိုးအခ မပေးလိုကြချေ။ ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး အဖြစ် တည်ရှိလာရန် ကြိုးစား အားထုပ်မှု မရှိကြချေ။ တစ်ညတာ မျှပင် အချိန်မပေး လိုကြ။
မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကို ပြောဆို တောင်းပန်သော အမှုကို ထွက် ၃၃း၁၃ တွင် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သူ့ကို ဘုရားသခင်က နှစ်သက် မျက်နိုးပါလျှင် အချက် (၃) ချက်ကို ရရှိလို ပါကြောင်း လျောက်ထား လေသည်။
သို့ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်သည် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရလျှင် မျက်နှာရ ကြောင်းကို အကျွန်ုပ် သိပါမည် အကြောင်း ကိုယ်တော်၏ လမ်းကို ပြတော်မူပါ။ ဤလူမျိုး သည် ကိုယ်တော်၏ လူဖြစ်ကြောင်းကို ဆင်ခြင်တော်မူပါ၊ အကျွန်ုပ် တောင်းပန်ပါ၏ ဟု ထာဝရဘုရားအား လျှောက်ဆို၏။
ရှေ့တော်တွင် မျက်နှာရ ချင်သည်။ ။ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းသောသူ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါက ဘုရား သခင်ထံမှ မျက်နှာတော် ရချင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အကြံ အစည်တော် ထဲတွင်သာ အသက်ရှင်ချင်သည်။ ဘုရားသခင် ငြိုငြင်မှာကို အရမ်း စိုးရိမ်သည်။ သင် ကိုယ်တိုင် လည်း ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် သိကျွမ်းပါက ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တွင် မျက်နှာရချင်သော နှလုံးသားဖြင့် အသက် ရှင်ချင် လာပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ် သိပါမည် (သိချင်သော နှလုံးသား ရှိသည်)။ ။မောရှေသည် ဘုရားသခင်နှင့် တိုက်ရိုက် ဘုရား သခင်ကို သိကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သဘောတော်ကို အစဉ်အမြဲ သိချင်သော နှလုံးသား ရှိသည်။ သိပါရစေဟု တောင်းလျှောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်တော် ထွက် စကားတော်များကို သိနားလည်ခြင်း မရှိလျှင် ဘုရားသခင်ကို သိသည်ဟု သင်မပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် သိရှိလာပြီဆိုပါက ဘုရားသခင်၏ လူတစ်ယောက် ဖြစ် ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်တော်၏ လမ်းကို ပြတော်မူပါ။ ။မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ လမ်းတော်ကို အမှန်တကယ် သိချင်သော နှလုံးသား ရှိနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုလမ်းတွင် အမှန် တကယ် အသက်ရှင် လျှောက်လှမ်း လိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ လမ်းတော်ကို သိမှသာ ဘုရားသခင်၏ နောက်တော်သို့ အမှန်တကယ် လိုက်သော သူတစ်ဦး ဖြစ် လာမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အထက်ပါ အချက် (၃)ချက်ကို လုပ်ဆောင်နေ သည်ဆိုပါက ဘုရားသခင်၏ မျက် မှောက်တော်တွင် အသက်ရှင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ လမ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ကောင်းကင် တံခါး ပေါက်ကြီးများ ကိုဖွင့်ကာ သင့်ကို မျက်နှာသာ ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတော် ၀မ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာ အသက်ရှင်ခြင်း (ထွက် ၃၃း၁၅-၁၇)
တဖန် မောရှေက ကိုယ်တော်တိုင် မသွားလျှင် အကျွန်ုပ် တို့ကို ဤအရပ်မှ ပို့တော်မမူပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်နှင့် ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရသော အကြောင်းသည် အဘယ်သို့ ထင်ရှားပါ မည်နည်း။ အကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကြွသွားတော်မူသော အားဖြင့် သာ ထင်ရှားပါမည် မဟုတ်လော။ ထိုသို့ အကျွန်ုပ်နှင့် ကိုယ်တော်၏ လူတို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိသမျှသော လူတို့နှင့် ခြားနား ရပါမည်ဟု လျှောက်ဆိုလျှင်၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်လျှောက်သည်အတိုင်း ငါပြုမည်။ သင်သည် ငါ့ရှေ့၌ မျက်နှာရပြီ။ သင့်ကိုသင်၏ နာမဖြင့် ငါသိ၏ ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။ (ထွက် ၃၃း၁၅-၁၇)
မာရှေက ဘုရားသခင်ကို ဆက်လက် တောင်းလျှောက် ခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ သစ္စာ တရားကို သက်သေထူရန် တောင်းလျှောက် ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ဟု ဆိုရာတွင် အမှန်တကယ် ရှိနေ သော ဘုရားသခင်၏ အားရ၀မ်းမြောက်ခြင်းနှင့် စပ်ဆက်ဖြစ် တည်နေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ရှင် လုပ်ဆောင်မှုကို အားမရ မနှစ်သက်ခဲ့ သည် ရှိသော် ဘုရားသခင်ကိုယ် တိုင်ပင် ကျွန်တော်တို့ ထံတွင် ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ယုံကြည်သူများနှင့် ကျန်သည့် လောကလူသားများအကြား ခွဲခြားမှုပြုရာတွင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက် တော်တွင် အသက်ရှင် ခြင်းသောသူများအား သူ၏ အားရ ၀မ်းမြောက် ခြင်းကို ပြသ ခဲ့သည်။
ယုံကြည်သူ (အသင်းတော်)သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက် တော်တွင် မရှိခဲ့ပါလျှင် သူတို့ ကိုယ်တိုင် လည်း ဘုရားသခင်ကို အားရ ၀မ်းမြောက်မည် မဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတရားကို ဘုရားသခင်၏ မျက် မှောက်တော်တွင် တိုး၍ အသက်ရှင် သောသူတိုင်းအား သက်သေ ထူလျှက် ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ မျက်မှောက်တွင် မရှိပါဟုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ကို မနှစ်သက် သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် အားရကျေနပ် သောသူဖြစ်ရန် မည်ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ အသက် ရှင်နိုင်ပါမည်နည်း။
1) ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားကို ၀မ်းမြောက်စေနိုင်ပါသည်။ (မဿဲ ၂၂း၃၇-၃၈) ကျွန်ုပ်တို့ ပထမ ဦးစားပေးသည် ဘုရားသခင်ကို မြတ်နိုးရန်သာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို အမြင့်ဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံး ချစ်ရန်အတွက် ခေါ်ယူခြင်း ခံရသည်။ ဘုရား သခင်ကို ပထမ နေရာ (အဓိက နေရာ) ထားရန် ဘုရားသခင် ဆန္ဒရှိပါသည်။
2) ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားကို ၀မ်းမြောက်စေနိုင်သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၆) ယုံကြည်ခြင်း မရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်နိုင်လျှင် ဘယ်သောအခါမျှ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေသောသူ ဖြစ်ရန် အခြား နည်းလမ်း မရှိနိုင်ပါချေ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို လုံးလုံး အားကိုးသော သူဖြစ်ပါက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းထား သောသူ ဖြစ်ပါသည်။
3) ဘုရားသခင်ကို နာခံခြင်းအားဖြင့် ဘုရားကို ၀မ်းမြောက်စေနိုင်သည်။ (ယော ၁၅း၁၄)။ သခင် ယေရှုခရစ် တော်က နာခံခြင်းရှိလျှင် ငါ၏အဆွေ ဖြစ်လာမည်ဟု ပြောဆိုထားပါသည်။ ကျွန်တော်တုိ့၏ နာခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဘယ်လောက် မိဿဟာရ နက်ရှိုင်းမှုရှိသည် ကို ဖော်ပြပေးနေပါသည်။
4) ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ဘုရားကို ၀မ်းမြောက်စေနိုင်ပါသည်။ (ဆာ ၁၅၀း၁-၂)။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦးခြင်းစီတိုင်း၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ကောင်းကြီး သြဘာ ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုရားက သင့်ကို မည်သည့် အရာများ မဆို ပြန်လည် ပေးနိုင်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်း ကို ယခုပင် ခေတ္တမျှ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရန် အချက် (၃) မည်သည့် အရာ ရှိပါသနည်း ဟူ၍ ချက်ခြင်း တွေးကြည့်လိုက်ပါ။
5) အမှုတော် ထမ်းဆောင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ၀မ်းမြောက် စေသည်။ (ယေရမိ ၄၈း၁၀)။ အမှုတော်ကို ကျိုးစား မဆောင်သော သူသည် ကျိန်ဆဲခြင်းကို ခံစေ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်၏ အသက်တာ ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို အမှုတော် ထမ်းဆောင် ခြင်းဖြင့် ပါဝင်စေလိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ တနင်္ဂနွေ ဘုရားကျောင်း တက်ရုံထက် ပိုမို၍ ဘုရားသခင် မျှော်လင့်နေ ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထဲတွင် အသက်ရှင်ခြင်း (ထွက် ၃၃း၁၈-၂၃)
တဖန်တုံ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းကို အကျွန်ုပ်အား ပြတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ် တောင်းပါ၏ဟု လျောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက ငါ၏ ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကို သင့်ရှေ့၌ ငါရှောက် သွားစေမည်။ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်လည်း သင့်ရှေ့၌ ငါကြွေးကြော်မည်။ ငါသည် ကျေးဇူး ပြုလိုသော သူကို ကျေးဇူးပြုမည်။ သနားလိုသော သူကို သနားမည်။ ၂ဝသို့ရာတွင် သင်သည် ငါ့မျက်နှာကို မမြင်နိုင်ရာ။ ငါ့မျက်နှာကို မြင်လျှင် အသက်ရှင် ရသောသူ တစုံတယောက်မျှ မရှိဟူ၍၄င်း၊ ငါ့အနားမှာ နေရာတခုရှိ၏။ သင်သည် ကျောက်ပေါ်မှာ ရပ်ရမည်။ ငါ့ဘုန်း ရှောက်သွားသောအခါ သင့်ကို ကျောက်ကြား၌ ငါသွင်းထား၍ ငါကြွသွားသည် အခိုက်၊ သင့်ကို ငါ့လက်နှင့် ဖုန်းအုပ်မည်။ ငါ့လက်ကို ရုပ်သိမ်းသောအခါ၊ ငါ့ကျောကိုသာ မြင်ရမည်၊ ငါ့မျက်နှာကို မမြင်ရဟူ၍၄င်း မိန့််တော်မူ၏။ (ထွက် ၃၃း၁၈-၂၃)
ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် ဘုရားသခင် ထံတွင်ရှိသော သာလွန်ထူးကဲ မြင့်မြတ်သည့် အရာများ နှင့် မည်သည့် အခါမျှ ကုန်ဆုံးနိုင် ခြင်း မရှိသည့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း အသရေတော် များကို ဖော်ပြလျက်ရှိပါ သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း အသရေတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နားလည် သဘောပေါက် ခံယူထားသော အရာခပ် သိမ်း၏ အခြား တစ်ဖတ်တွင် ရှိနေသော အရာဖြစ်ပါသည်။
ဘုန်းတော်ဟု ဆိုရာတွင် ဟီဘရူး ဘာသာ စကားအားဖြင့် “Kabod” ဟု ခေါ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ သိသာ ထင်ရှားစွာ အရိုအသေ ပေးခြင်း၊ အကြီမြတ် ဆုံးသော နာမည် ဂုဏ်အသရေတော်ဖြစ်ခြင်း၊ အမြင့်ဆုံးသော ကြည်ညို လေးစားဖွယ်ဖြစ်ခြင်း ဟု ဆိုလိုပါသည်။ အမှန်တကယ် အနေအထား တွင် မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ ထည်ဝါမှု အားလုံး၊ ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်မှုအားလုံး၊ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး အစွမ်းသတ္တိ အားလုံးနှင့် ဘုရား သခင်၏ ဖြစ်ခြင်း အားလုံးကို မြင်တွေ့နိုင်ရန် တောင်းလျှောက်နေပါသည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကို အတားအဆီး အကွယ် အကာမရှိ မြင်တွေ့ချင်ပါသည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်သမျှအားလုံးကို မြင်တွေ့နေချင်သူ ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကို လည်း မေးခွန်းတခု မေးပါရစေ။ ဘုရားသခင်၏ ခမ်းနားထယ်ဝါ မှုများကို သင်ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ချင်သူ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပါသလား။ ဘုရားသခင်ကို အတားအဆီး၊ အကွယ်အကာမရှိ မြင်တွေ့ ချင်သူ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေတော်အားလုံးကို မြင်တွေ့ ချင်သူ ဖြစ်ပါသလား။
မာရှေသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော် မှတပါး အားလုံးကို မြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် သူ၏ မျက်နှာတော်ကို မြင်တွေ့နိုင် ရန် အခွင့် မပေးခဲ့ချေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူနှင့် ဘုရားသခင် အကြားတွင် ခြားနားမှု များရှိရန် လိုအပ်နေ သေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် အရင်းနှီးဆုံး မိသဟာရ ရှိနေသည့် တိုင်အောင် ကွာဟမှုများကို စေ့စပ်ပေးနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးချေ။ ထိုအကြောင်း အရာကပင် သခင် ယေရှု ခရစ်တော်ကို လူ့လောက ဌာနီသို့ ပို့ဆောင်ရန် အခြေအနေ တစ်ခု ဖြစ်လာတော့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို လူ့လောကသို့ လာရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိသော ဘုရား ဧမာနွေလ “Immanuel” ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အတူရှိနေကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှုသည် အသက်ရှင်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံချိန်တွင် ဗိမ္မာန်တော်မှ ကလားကာကြီး နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ထိုကလားကာ ကြီးမှာ လူနှင့် ဘုရားအကြားမှ ခြားနားချက်များကို ဖယ်ရှင်းပေး လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်တော်၏ လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိသော အတွေ့အကြုံသစ်ကို ခံစားနိုင် ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အ သက်ရှင် နေထိုင်မှု ဘ၀ထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှား ပြသနိုင်ရန် အချက်နှစ် ချက် တင်ပြလို ပါသည်။
1. ကျွန်ုပ်တုိ့သည် နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုတွင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ထဲတွင်သာ အသက် ရှင်သင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်ရှင်မှု ထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက် တော်ကို ရှာဖွေရန်နှင့် ဘုရားသခင်နှင့်သာ အသက်ရှင် ချင်သော ဆန္ဒရှိ ဘို့လိုအပ် ပါသည်။
သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ (သို့မဟုတ်) အာဒံကဲသို့ ဘုရားသခင်ကို ရင်မဆိုင်ရဲသော ကြောင့် ပုန်းအောင်းနေသောသူလား။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်ဘ၀ အသက်ရှင်မှု ထဲတွင် ဘုရားသခင် နှစ်သက်စေရန် အသက်ဘို့ လိုအပ်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တုိ့၏ ကြိုးပမ်းမှု ဟူသမျှသည် ဘုရားသခင် နှစ်သက်စေရန်သာ ပြုမူလုပ် ဆောင်ဘို့ လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏ အသက်ရှင်မှုသည် ဘုရားသခင် နှစ်သက် စေပါသလား။
ဤနေ့သည် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်အကြားတွင် နက်ရှိုင်းသော မိသဟာရ ဆက်ဆံရေး အတွေ့ အကြုံ တစ်ခုရရှိလာရန် သင့်ကို ဘုရားသခင်က ဆွဲကိုင် ခေါ်ယူချင်နေပါသည်။ သင့်ကိုယ်တိုင် ဘုရား သခင်ကို ပိုမိုသိကြွမ်းပြီး သူ၏ မျက်မှောက်တော် ထဲတွင် အသက်ရှင် လိုသော နှလုံးသားကို သင့် အထဲတွင် ထည့်ပေး ခြင်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက် တော်တွင် ပိုမိုအသက် ရှင်လိုပါလျှင် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော် ခြေရင်းဆီသို့ လှမ်းလျှောက်လာပြီး ဘုရား သခင်ထံတွင် သင် အလိုရှိသော အရာများကို တောင်းလျှောက်ကာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့သော ဘ၀တစ် ခုကို တည်ဆောက် နိုင်ပါစေ။
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 5:59 AM